UThixo Ungumntu Onjani? | Oko Kufundiswa YiBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu isi-Igbo
UThixo Ungumntu Onjani?
Unomzimba onjani uThixo?
“UThixo unguMoya.”—Yohane 4:24.
IBhayibhile ithi uThixo ungumoya. (2 Korinte 3:17) Ngoko ke, uphakame kakhulu kunathi. Kweyoku-1 kuTimoti 1:17 iBhayibhile ithi uThixo: ‘NguKumkani kanaphakade, ongenakonakala, nongabonakaliyo.’ Kwakhona ithi: “Akukho bani uye wambona uThixo.”—1 Yohane 4:12.
Umdali wethu uphakame kakhulu kuthi kangangokuba asikwazi nokuqikelela ukuba unjani. Incwadi kaIsaya 40:18 ithi: “Ningamfanisa nabani na uThixo, yaye ningabeka ntoni na enokufana naye ecaleni kwakhe?” Kwa-amazulu la amangalisayo esiwabonayo awanakuthelekiswa noSomandla.—Isaya 40:22, 26.
Noxa kunjalo, zikho izidalwa ezikrelekrele ezimbonayo nezithetha ngqo noThixo. Kwenzeka njani? Kaloku nazo zingumoya yaye zihlala ezulwini. (1 Kumkani 22:21; Hebhere 1:7) UYesu Kristu wathi ngezi zidalwa zomoya ezibizwa ngokuba ziingelosi: “ [Zona] zisoloko zibubona ubuso bukaBawo osezulwini.”—Mateyu 18:10.
Ngaba UThixo Ukho Kwindawo Yonke?
“Ngoko ke, nina nize nithandaze ngale ndlela: ‘Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho.’”—Mateyu 6:9.
IBhayibhile ayifundisi ukuba uThixo uhlala kwindawo yonke okanye ukho kuyo yonke indawo. Kunoko amazwi kaYesu akuMateyu 6:9; 18:10, abonisa ukuba uThixo unomzimba yaye ‘nguBawo’—kwaye uhlala emazulwini, ‘indawo ahlala kuyo emisiweyo.’—1Kumkani 8:43.
Xa wayesele eza kumka emhlabeni, uYesu wathi: “Ndiyalishiya ihlabathi yaye ndiyemka ndiya kuBawo.” (Yohane 16:28) Emva kokufa kwakhe waza wavuswa enomzimba womoya, uKristu wenyukela “ezulwini ngokwalo, ukuze ngoku abonakale phambi kukaThixo.”—Hebhere 9:24.
Ezi nyaniso ngoThixo zibalulekile. Kutheni sisitsho nje? Okokuqala, ekubeni uThixo engumntu ophilayo sinokukwazi ukufunda ngaye size sisondele kuye. (Yakobi 4:8) Okwesibini, ukwazi inyaniso ngoThixo kuyasinceda ukuze singakhonzi oothixo bobuxoki, njengemifanekiso eqingqiweyo. Kweyoku-1 kaYohane 5:21, iBhayibhile ithi: “Bantwana abancinane, zilindeni kuzo izithixo.”
Abantu benziwa njani ngomfanekiselo kaThixo?
“UThixo wamdala umntu ngokomfanekiso wakhe, wamdala ngokomfanekiso kaThixo; wadala indoda nebhinqa.”—Genesis 1:27.
Ekubeni singabantu, siyakwazi ukubonisa iimpawu zikaThixo ezinjengothando, ukulunga nobulumko. Eneneni iBhayibhile ithi: “Yibani ngabaxelisa uThixo, njengabantwana abaziintanda.”—Efese 5:1, 2.
UThixo usenze sanenkululeko yokuzikhethela, nto leyo esenza sikwazi ukukhetha okulungileyo kokubi size sikwazi nokubonisa abanye ukuba siyabathanda. (1 Korinte 13:4-7) Sidalwe sanobuchule bokwenza izinto ezininzi, siyakwazi ukunandipha izinto ezintle ibe siyabuxabisa ubuhle bomhlaba esiphila kuwo. Ngaphezu koko, xa sasidalwa kwafakwa ngaphakathi kuthi umnqweno wokukhonza uThixo ukuze sazi iinjongo zoMdali wethu.—Mateyu 5:3.
Kukunceda ngantoni ukwazi inyaniso eseBhayibhileni? Okukhona ufunda ngoThixo kokukhona uya kukwazi ukuphila ngendlela afuna ngayo. Oko kuya kukwenza wonwabe gqitha, waneliseke, uze uxole emphefumlweni. (Isaya 48:17, 18) UThixo uyazi ukuba iimpawu zakhe ezintle ziyabatsala abantu zize zibenze bahambe ngendlela ekhokelela kubomi obungunaphakade.—Yohane 6:44; 17:3.